डचटाउनमा क्युर हिंसा • डचटाउनएसटीएल.org • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
डचटाउनमा ठीक हिंसा
प्रकाशित 27th सक्छ, 2021
२०१ 2019 मा, सेन्ट लुइसको शहरले भाग लिनको लागि डचटाउनलाई शहरको एउटा छिमेकमा छनौट गर्‍यो उपचार हिंसा, एक हिंसा विरोधी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल जुन देश भरिका धेरै शहर र छिमेकमा सफल भएको छ। अपराध र सुरक्षाका सवालहरूमा नयाँ दृष्टिकोण लिई धेरै डचटाउनका बासिन्दाहरू हाम्रा छिमेकीहरू र छिमेकीहरूको भविष्यका लागि आशावादी छन्।
र त्यो आशा समाप्त भइरहेको छ। मे २th मा, शहरको स्वास्थ्य विभागले डचटाउन क्याचमेन्ट क्षेत्रमा वर्ष-देखि-तारीख अपराध तथ्या showing्कहरू देखाएको तथ्या released्कहरू जारी गर्‍यो, जसले डचटाउनको उचित भाग र माउन्ट प्लीजन्ट छिमेकको महत्वपूर्ण अंशहरू समेट्छ। बन्दुक सम्बन्धी अपराधहरू - बढ्दो आक्रमण, डकैती र हत्यामा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ जब शहरका अन्य भागहरूले हिंस्रक अपराधको साथ संघर्ष गरिरहेका छन्।
गत वर्ष नोभेम्बरमा डचटाउनमा क्युर हिंसा कार्यक्रम भर्खर उठ्यो र अहिलेसम्मको नतीजा प्रभावशाली छ। हामीले केवल छिमेकीमा हिंस्रक अपराधमा ठूलो गिरावट देख्यौं, तर क्युर हिंसा टिम समुदायको अभिन्न अंग भएको छ। यदि तपाईं विगत धेरै महिनाहरूमा डचटाउन कार्यक्रममा भाग लिनु भएको छ भने, तपाईंले निश्चित रूपमा केही हिंसा कार्यक्रम प्रबन्धकहरू र हिंसा अवरोधकर्ताहरू भेट्नु भएको छ जो प्रत्येक रात डचटाउन सडकमा बाहिर आउँछन् प्रत्येकलाई सुरक्षाको लागि।
निको हिंसा के हो?
अपराध र हिंसालाई सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दाको रूपमा सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण अपनाउँदै, क्युर हिंसाले लक्षणहरूको उपचारको सट्टा अपराधको जडलाई सम्बोधन गर्दछ। बाट आफ्नो वेबसाइट:
हिंसा एक संक्रामक समस्या जस्तै व्यवहार गर्दछ। यो जोखिमको माध्यमबाट प्रसारित हुन्छ, संक्रामक मस्तिष्क संयन्त्र र सामाजिक प्रक्रियाहरू मार्फत अधिग्रहण गरिन्छ, र प्रभावकारी रूपमा उपचार र स्वास्थ्य विधिहरूको प्रयोगबाट रोक्न सकिन्छ।
सन् १ 2000 २० मा शिकागोमा क्युर हिंसा शुरू भयो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको हस्तक्षेप विकास इकाईका चिकित्सक, महामारी रोग विशेषज्ञ, र पूर्व निर्देशक डा। ग्यारी स्लटकिनले यस कार्यक्रमको स्थापना गर्नुभयो। क्षयरोग, हैजा, र एड्सको महामारीको प्रतिरोध गर्न वर्षौं काम गरिसकेपछि उनी हिंसाको महामारीको सामना गर्न अघि बढे।
अमेरिका र विश्वभरका शहरहरूमा, क्युर हिंसा 40०% देखि %०% को हिंसामा गिरावट आउँदछ।
हिंसाको उपचारले कसरी काम गर्दछ?
क्युर हिंसाले हिंसा रोक्न एक तीन-चरण दृष्टिकोण अपनाउँछ जुन अन्य महामारीहरू समावेश गर्न प्रयोग गरिएको दृष्टिकोण जस्तै हो। कार्यक्रमले अवरोधकहरू, आउटरीच कामदारहरू, र अन्य धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो दृष्टिकोण लागू गर्न रोजगार दिन्छ।
द्वन्द्वहरू पत्ता लगाउनुहोस् र रोक्नुहोस्
ठीक हिंसा रोजगार अवरोधकहरू जुन समुदायमा ज्ञात र विश्वास गरिएको छ। अवरोधकहरू प्राय: "सडक क्रेडिट" को साथमा छिमेकीहरू हुन्। अवरोधकर्ताहरूले हिंसा र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न समुदायमा व्यक्तिलाई चिन्न उनीहरूको विश्वसनीयता प्रयोग गर्छन्। तिनीहरू हिंसात्मक घटनाहरू पछि मध्यस्थता प्रविधिको माध्यमबाट विवादास्पद विरोध, र तिनीहरू फेरि उठ्दैनन् भनेर निश्चित गर्न परिस्थितिलाई मोनिटर गर्न पछि प्रतिरोध रोक्नको लागि काम गर्दछन्।
उच्च जोखिम व्यक्तिको पहिचान र उपचार गर्नुहोस्
आउटरीच कामदारहरूले हिंसामा संलग्न हुने उच्च जोखिममा व्यक्तिहरूलाई पहिचान र सम्पर्क गर्छन्। कामदारहरूले जोखिममा परेकाहरूलाई सामाजिक सेवामा पहुँच प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छन् जस्तै औषधि उपचार र रोजगारी सहायता। उनीहरूले हिंसाको नतीजाबारे छलफल गरेर र द्वन्द्व समाधानका लागि वैकल्पिक विधिहरू सिकाएर व्यवहार परिवर्तन गर्न पनि खोज्छन्।
सामाजिक मानदण्ड परिवर्तन गर्नुहोस्
क्युर हिंसा टिमले समुदाय, समुदाय, नेताहरू, व्यवसायिक मालिकहरू, विश्वास नेताहरू, र सेवा प्रदायकहरू परिवर्तन गर्न र छरछिमेकमा हिंसाको प्रतिक्रियालाई सुदृढ पार्न सहित समूदायका मानिसहरूसँग संलग्न गर्दछ। तिनीहरू समुदायको आपत्ति र संकल्प प्रदर्शन हिंसाको प्रत्येक घटनामा प्रतिक्रिया। थप रूपमा, तिनीहरू सकारात्मक सामाजिक मानदण्डहरूलाई प्रोत्साहित गर्न र समुदायमा अब उप्रान्त हिंसा सहने छैन भन्ने सन्देश दिनको लागि छिमेकी संगठनहरूसँग काम गर्दछन्।
सेन्ट लुइस बोर्ड अफ एल्डरमेनले २०१ 2019 मा क्युर हिंसालाई बजेट विनियोजन गरेको थियो। डचटाउनको साथसाथ, उत्तर पक्षका वेल्स-गुडफेलो र वालनाट पार्क वरपर पनि कार्यक्रममा भाग लिन्छन्।
शहरले स्थानीय नाफा नाफा चयन गर्‍यो रोजगार जडान डचटाउन छिमेकमा क्युर हिंसा प्रशासन गर्न। तिनीहरूको टोलीले यसको बाहिर काम गर्दछ छिमेकी इनोवेशन केन्द्र Meramec मा। कार्यक्रम सञ्चालनको अलावा, छिमेकमा रोजगार जडानको उपस्थितिले बेरोजगार छिमेकीहरूलाई रोजगार र तालिम पाउन अवसरहरू प्रदान गरेको छ। रोजगार जडान डचटाउन छिमेकको घटनाहरूमा बारम्बार साझेदार हो डचटाउन गर्मी Vibes र चलचित्र रातहरू, जहाँ तपाइँ Coio हिंसा टिम सबै प्रकारका छिमेकीहरु संग कुरा गरिरहेको पाउनुहुनेछ।
जस्तो कि हामी यस लेखको शीर्षमा देख्छौं, परिणामहरू अहिलेसम्म उल्लेख गरिएका छैनन्। क्युर हिंसाले डचटाउनमा उनीहरूको पहिलो months महिनामा pot० भन्दा बढी सम्भावित हिंसात्मक परिस्थितिहरूमा अवरोध पुर्‍याएको छ। त्यस पछाडि, टोलीले धेरै जोखिमपूर्ण छिमेकीहरूको पहिचान र काम गरेको छ र असंख्य समुदायका सदस्यहरू र सरोकारवालाहरूसँग कुराकानी गरेको छ समुदायमा आफैलाई रोक्न र अपराधको जडका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न। हामी उनीहरूको उपस्थितिको लागि अविश्वसनीय रूपले आभारी छौं र हामी सबैको लागि बढी प्रगति र सुरक्षित छरछिमेक हेर्न अगाडि हेर्दछौं!
तल दायर गरिएको अपराध र सुरक्षा. सबै कोटीहरू देखाउनुहोस्. अपराध र सुरक्षा र डचटाउन. कम कोटीहरू देखाउनुहोस्.
यस पोस्ट साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पोष्ट अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो 30th सक्छ, 2021 .
DutchtownSTL.org अपराध र सुरक्षा डचटाउनमा ठीक हिंसा